Man United Oo Old Traffrod Ku Dubatay Kooxda Dhibaataysan Ee Crystal Palace, Fellaini Oo Laba Gool Dhaliyay Iyo Romelu Lukaku Oo Shabaqa Gaadhay. – WWW.Gool24.net
Man United Oo Old Traffrod Ku Dubatay Kooxda Dhibaataysan Ee Crystal Palace, Fellaini Oo Laba Gool Dhaliyay Iyo Romelu Lukaku Oo Shabaqa Gaadhay.
Manchester United ayaa Old Traffrod ku karbaashtay kooxda musiibadii abid ugu xumayd ee horyaalka Premier Leaque dhex rafanaysa ee Crystal Palace, waxayna sidii laga filayay United gaadhay guul sahlan oo ay ku raaxaysatay. Man United ayaa xaalada ku sii xumaysay Roy Hodgson oo dhawaan si samato bixin ah ula wareegay shaqada Crystal Palace taas oo todobaadii kulan ee Premier Leaque ugu horeeyay wada guuldaraysatay iyada oo waliba woodi waydayin ay xataa hal gool dhaliso.
Jose Mourinho iyo kooxdiisa Manchester United ayaan wax naxariis ah u samayn kooxda martida u ahayd ee cago jiidka ku soo gadhay Old Traffrod waxayna goga ugaliyeen 3-0 iyada oo Juan Mata uu ahaa xidiga goolasha United daahfuray daqiiqadii 3 aad ee bilawgii kulankan kadib markii uu gool caawin ka helay da’yarka Marcus Rashfrod, wuxuuna goolkan xili hore ahaa markiiba dhulka ku riday rajadii aadka u yarayd ee ay Crstal Palace ka qabtay haddii ay wax dhibco ah ka heli karto kulankan.
Manchester United ayaa goolkeeda labaad ee ay ciyaarta ku dishay heshay daqiiqadii 35 aad kadib markii xidiga uu Mourinho sida wayn u aaminsan yahay ee Fellaini uu dhaliyay goolka labaad ee Red Devils waxaana caawinta goolkan sameeyay Ashley Young oo bandhig cajiib ah samaynayay waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay qaybtii hore ee ciyaarta Man United hogaanka ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta Man United ayaa wali si ahayd kooxda goolal kale laga filan karayay waxayna Crystal Palace ahayd kooxdii lixdii kulan ee hore soo awoodi wayday in ay wax saamayn ah kulamadeeda ku yeelato.
DAQIIQADII 49 AAD Fellaini ayaa dhaliyay goolkiisa labaad ee kulankan iyo waliba goolka saddexaad ee Manchester United waxaana caawinta goolkan markale sameeyay Marcus Rashford waxayna markan ciyaartu noqotay 3-0 ay Red Devils ciyaarta hurdada ugu dirtay.
DAQIIQADII 86 AAD Romelu Lukaku ayaa cadeeyay in aanu garoonka ka baxayn isaga oo aan gool dhalin waxaana fursada uu kaga mid noqday gool dhaliyaasha u sahlay Martial kaas oo caawinta goolka afraad ee United sameeyay waxayna ciyaartu noqotay 4-0 ay Man United ku xasuuqayso Crystal Palace.
Lukaku ayaa dhaliyay goolkiisii 11 aad ee uu Man United xili ciyaareedkan uga soo dhaliyay tartamada oo dhan wuxuuna sii watay gool dhalintiisa cajiib ah inkasta oo ay Crystal Palace inta badan ciyaarta u diideen in uu goolkan dhaliyo.
Crystal Palace oo u baahan in ay garsooruhu ciyaarta dhameeyo ayaa la soo gaadhay waqtigii dhamaadka ciyaarta waxayna United guul wayn ku gaadhay 4-0 iyada oo hogaanka Premier Leaque sii qabtay ka hor kulanka Chelsea iyo Manchester City.